Cayman Islands Inozivisa Chirongwa Chekuvhurazve kuInternational Leisure Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Cayman Islands Nhau » Cayman Islands Inozivisa Chirongwa Chekuvhurazve kuInternational Leisure Tourism
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Cayman Islands Nhau • Kurwisa • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Chikamu chechishanu-chikamu chekudzoka kwakachengeteka kwekushanya kunovavarira kuona Cayman Islands ichizarurwazve zvizere muna Ndira 2022.
Kutanga mukutanga kwaKurume 2020, iyo Cayman Islands nekukurumidza uye nenzira inovhara yakavhara miganhu yayo kune dzakawanda kufamba uye cruise traffic kuchengetedza vafambi uye vagari kubva padenda repasi rose.
Maitiro matsva-echikamu mashanu ekuvhurazve anoenderera mberi nekuchengetedza vanhu veCaymanian, uku achinyatso bvumidza vashanyi vekunze kunakidzwa neCayman Islands zvakare.
Kana nyika yapedza zvikamu zvese zvishanu uye zvichitevera ongororo yakadzama kubva kuHurumende nevakuru vehutano, maCayman Islands achapemberera Grand Re-Opening.
Vaya vanga vachirota nezve chena jecha mahombekombe, mvura yakadzika, uye bespoke hupfumi muCayman Islands vanogona kukurumidza kuita kuti zviroto zvavo zviitike. Cayman Islands yazivisa hurongwa hwekutanga kugamuchira zvakachengeteka vashanyi vanodzoka kuGree Cayman, Cayman Brac, uye Little Cayman kuburikidza nemaitiro ane danho rekuvhurazve nzira.
“Kubvira munaKurume 2020, maCayman Islands anga achingwarira mukuedza kwese kuchengetedza vanhu vedu nevashanyi; kubva mukuyedzwa nekukurumidza uye kwakapararira, kuisa mari muvashandi veCaymanian nekushandisa danho rakapetwa rekuvhurazve mhenderekedzo dzedu zvakachengeteka kune vashanyi vanotsvaga umbozha, hutano nekuchengeteka kwenharaunda yedu kwaive kwakakosha pazvisarudzo zvese, ”vakadaro Gurukota rezveKushanya neZvokufambisa, Hon. Kenneth Bryan. “Vandinoshanda navo neni muhurumende tashanda nesimba kuita nzira iyi ine gadziriro tichigadzirira kuvhurwa kwemiganhu yedu kune vafambi vekunze - uye tinofara kuzivisa kuti kumirira paradhiso kwave kupera! Vashanyi vedu vanozofarira zviitiko zvine mutsindo nezvikwiriso zvatakaita kunzvimbo iyi - zvichiratidza kuti Cayman akakodzera kumirira. ”
Kutanga kutanga kwaKurume 2020, iyo Cayman Islands nekukurumidza uye zvine mutsindo akavhara miganhu yayo kuenda kune dzimwe nyika kufamba uye cruise traffic kuchengetedza vafambi uye vagari kubva kune denda repasirese uye ndokubuda mudambudziko sedanho retariro, kuchengetedza yakanaka kubuda kwezuva, kutsvoda kwe stingray kwoushamwari, nyika-kirasi chikafu, uye inodziya Caymankindness ye makore anouya. Maitiro matsva-echikamu mashanu ekuvhura zvakare acharamba achichengetedza huwandu hweCaymanian, nepo ichinyatso kubvumidza vashanyi vekunze kunakidzwa nezuva, jecha, gungwa uye chengetedzo yeCayman zvakare.
Iyo Cayman Islands Hurumende (CIG) yakashanda padhuze nevakuru vehutano, chikamu cheveruzhinji, uye vega chikamu kuvaka nzira ino yezvikamu zvishanu yekuona chiitiko chakachengeteka uye chine hutano kune avo vanoshanda muindasitiri uye vashanyi vanosarudza kuona hwakanakisa hwe bespoke iyo nzvimbo yechitsuwa inozivikanwa nezve pasi rese.